Ny vahaolana amin'ny stains zavona amin'ny Aluminium iMac | Avy amin'ny mac aho
Ao amin'ny tranonkala maro ao amin'ny tontolon'ny bilaogy sy forum no namakiako momba ny fifanakalozana iMac feno amin'ny alàlan'ny fiantohana, ny fividianana dehumidifiers ary ny tehina jamba maro hiatrehana ny olan'ny fogging amin'ny solomaso iMac.
Ny vahaolana dia tsotra loatra ka tokony ho tonga ao amin'ny torolàlana satria tsy mila zavatra manokana.
Tsy vahaolana amin'ny olana izany fa ny fanadiovana ny vera amin'ny fomba milamina kokoa.
Ny vera an'ny iMac dia mifamatotra amin'ny fomba mavitrika noho izany dia tsy maintsy manintona azy fotsiny isika, noho izany dia hampiasa kaopy suction mahazatra ampiasaina hanantonana lamba malaso avy amin'ny taila ao an-dakozia na ny kapoaka sotro amin'ny fako GPS fiara; misy karazana kapoaka suction hataonao. (Raha tsy manana kaopy suction ianao dia ampiasao cellophane, ataovy misintona eo afovoany)
Apetakay amin'ny zoron'ny vera ny kaopy fisotroana ary atsipazo
Manasa ny vera ao amin'ny fitoeran'ny lakozia izahay (miaraka amina lamba amin'ny zavona voaorina, tsy maninona nefa efa nanararaotra nanadio azy izahay)
ataontsika maina amin'ny lamba na avelantsika ho maina eo amin'ny lovia no izy
naverinay teo amin'ny toerany ilay vera
Mora toy izany.
Ekena, ny olana dia avy amin'ny lesoka famolavolana ao amin'ny iMac saingy heveriko fa tsotra ny vahaolana ka, farafaharatsiny ho ahy, tsy mendrika ny miady amin'i Apple izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » iMac » Ny vahaolana amin'ny tasy zavona amin'ny alim-borona iMac
71 hevitra, avelao ny anao
Alberto Rojas dia hoy izy:
Ary ahoana no ahafahanao manadio ny zavona sy ny holatra ao anatin'ny efijerin'ny pro macbook? Misaotra anao ary iza no afaka manome ahy ny vahaolana amin'ity olana ity
Valiny tamin'i Alberto Rojas
Tsy haiko, hitako fa tsotra be ny vahaolana ka azo antoka fa misy hafetsena hehehe. Ny tiako holazaina dia mety afaka manadio ny vera ianao, saingy tsy manakana ny vovoka hiditra ianao raha misokatra. Tena tsy fantatray ny fiantraikan'izany amin'ny imac.
Tsy misalasala aho fa mandaitra ny vahaolana arahinareo, mora be izany ho ahy ka izany angamba no antony isalasalako
jaca101 dia hoy izy:
@ Jose Andao hojerentsika, ny vatasarihana dia ilay zavatra, ny ao ambadiky ny vera tsara tarehy dia tsy inona fa ny monitor glosy mahazatra, avia, raha mahazo vovoka amin'ny fanesorana ilay vera mandritra ny minitra vitsy dia diovinao toy ny hafa izay tsy tonga miaraka amin'ny vera.
@Alberto Rojas Ny tena marina dia tsy haiko ny manala ny vera amin'ny pro MacBook vaovao, tsy mbola nanana iray nisedra azy aho. Heveriko fa tsy mandeha amin'ny andriamby miaraka amin'ny habaka kely loatra nefa mety misy karazana clasps na zavatra hafa, efa nanandrana nisintona kapoaka suction ve ianao mba hahitana izay mitranga?
Valiny amin'ny jaca101
Mazava ho azy fa mora, mora amin'ny kaopy suction kely. Manana ny hamandoana aho. Azafady azavaiko, eo amin'ny efijery dia mbola misy soritra kely eo amin'ny tapany ambony, izay nitranga koa tamin'ny sarom-pasaka, ireo, nofafako fotsiny izy ireo izao, fa ny hafa? Na izany na tsy izany dia tsy haiko raha zavatra hafa ankoatry ny lesoka famolavolana ... Misy hevitra ve? misaotra
@Felipe lazainao fa misy hamandoana AO AMIN'NY rakipeo manjelatra azy manokana ary koa eo amin'ny vera ??? satria raha eo an-tampony izy io dia diovina toy ny monitor rehetra, raha mila izany karazana busa hanadiovana ireo mpanara-maso ...
Ny efijery amin'ny MacBook Pro-ko dia 17 ″. Ary ny zavona sy tasy dia ao anatiny na ambany, fa tsy eo ambony. Toa tsy tokony nesorina tao amin'ilay casing aho. Misy sahy manao fitsapana ve?
@Alberto Rojas Fa… amin'ny 17? Macbook pro? Tsy Unibody io, mazava ho azy, avia, tsy misy vera eo anoloana io, ny efijery ihany ... tsara, vahaolana ratsy, heveriko fa efa Apple ny olanao ...
Tsy unibody io, 2.33 GHz io. Noheveriko fa zavatra marefo kokoa io. Tsy azonao an-tsaina ny olana rehefa mamerina mamerina sary ireo sary, teboka mainty matoatoa na aiza na aiza. Ho an'i Apple avy eo.
Raha manana teboka mainty ianao dia noho izy manana pixel maty, ho an'i Apple fa izao!
Ireo teboka dia mitovy amin'ny takelaka tsy miova, tsy misy endrika toy ny holatra, izay miseho ao anaty lantina sary.
Ampidiro ilay hafahafa… amin'i Apple!
Trocoloso dia hoy izy:
Salama daholo. Ny fanesorana ny efijery no vahaolana mahomby indrindra sy maharitra indrindra, nefa misy ihany koa vahaolana hafainganam-pandeha hafa tsy mila esorina ny efijery: makà mpanamory volo ary tsofy mivantana ny rivotra mafana eo amin'ny efijery imac, afaka segondra vitsy tsy hita. Araka ny nolazaiko dia vahaolana haingana sy azo ampiharina izy io, saingy rehefa afaka kelikely dia hiseho ireo tasy raha mando be ilay toerana. Miarahaba.
Mamaly an'i Trocoloso
Salama te hanontany aho raha manala ny vera, manjavona ilay famirapiratana manelingelina.
Hahahaha… .., ianareo mpampiasa Mac, hitako tsy mampino ry zareo.
Tsy azoko fotsiny, mazava ho azy, maninona ianao no tsy mametraka ny vera ao anaty vilia fanasana lovia miaraka amin'ny kalônitôna ultra.
Ralehilahy, ny marina dia tsy fahombiazana tsy azo avela io, raha nividy iray aho ary nandoa 1700 Euros hananana ireo olana ireo dia nikiakiaka tany an-danitra aho. Ary tsy mpampiasa windows very aho izay tsy manao afa-tsy ny mitsikera paoma, ny mifanohitra amin'izay, aorian'ny fijaliana miaraka amin'ny win vista dia te-hividy imac aho, saingy mahita ity tsy fahombiazana ity ary iray hafa toa manome amin'ny mpamily ny sary Aleoko miandry raha hamaha azy ireo, hatramin'ny 1649 euro fa ilay maodely tadiaviko dia tsy laniana isan'andro.
Ianareo mpampiasa paoma dia tokony mitaraina bebe kokoa rehefa misy tsy mahomby na tsy dia misy dikany ny iray amin'ny vokatra paoma, satria amin'ity fomba ity dia hikarakara bebe kokoa momba ny fanomezana fahafaham-po sy manome onitra ny mpampiasa azy ny paoma. Saingy raha ny mifanohitra amin'izay no ataon'izy ireo, maneho ny fahafaham-po ankavia sy havanana ny vokatra ary indraindray aza, mamadika ny fatiantoka ho hatsaram-panahy (tranga amin'ny iphone), ara-dalàna raha tsy mametraka ny batterie amin'ny 200% ny orinasa hamahana ireo olana.
Lazaiko aminao fa namboarina mora foana ilay zavatra. Rehefa manana Apple Care aho dia nanova ny écran maimaimpoana i Apple.
Sakura dia hoy izy:
Mazava ho azy, satria tsy apetrakao ao anaty vilia fanasana lovia koa ny vera miaraka amina calgonit ultra.
Sakura, atsaharo ny resaka tsy misy dikany, ny hevitr'ireo fanehoan-kevitra ireo dia mamokatra sy mahasoa, noho izany dia mifanampy tokoa izahay.
Fonsi dia hoy izy:
Somary saro-bahana ny olako, manana tsipika marindrano tonga lafatra misy loko mainty aho, mitovy loko amin'ny zavona, eo ankavanan'ny farany, ny refy dia manodidina ny 8cm toa ny nitazako azy tamin'ny mpitondra, ary afaka ihany ho hita mazava ny lokony…. Indraindray dia manjavona izy rehefa tapaka ny mac nandritra ny andro maromaro, avadiko ary tsy eo izy, fa manomboka miseho amin'ny ora maro izy ary miseho tsikelikely arakaraka ny fotoana tsy famonoana ny makina. Raha milaza ny marina aho, ary nodioviko ny vera, km toa metrakilate efa tonta io, ary namelatra azy kokoa noho ny volamena, saingy indrisy hitako fa ao ambadiky ny tft io, ary tsy sahiko manokatra mac raha hanadio ny tft ao ambadika, tsy haiko ny momba ny olona, ​​saingy miseho be dia be izany, ary mpamorona sary aho ary manelingelina, ankoatr'izay dia izaho no ostia d mora tohina amin'ireo zavatra ireo ary ny vidin'ny makina dia tsy dia mora loatra. …. misaotra ny rehetra
Valiny tamin'i Fonsi
Fonsi, ho hitanao amin'ny mpanara-maso lcd, ny famirapiratana sy ny loko dia vokarina amin'ny fomba samy hafa, hita fa ny pixel an'ny lcd no namoronana ny loko, fa ny jiro dia vokatry ny jiro mitsivalana ao aoriany, ka raha ny hadisoanao no iray amin'ireo jiro tokony hifandraisanao amin'ny paoma
Ie, tapaka ny TFT anao, tsy maintsy manamboatra azy ianao ary tsy maintsy rakotry ny fiantohana.
Salama tsara, manana iMac 24 ″ 2.8 ati radeon sns sns sns ...
Toy ny olona maro ... Nahazo ireo tasy faly tao anaty lovia polycarbonate ...
Ny Samsung monitor sy ny super-drive koa tsy nahomby ahy ... fa tantara hafa izany.
Na dia teo ambanin'ny fiantohana aza dia nanova ny fitaratra tsy tapaka izy ireo isaky ny mivoaka ny zavona eo amin'ny zoro havia ambony.
Tamin'ny fitsangatsanganana isan-karazany tany ktuin dia hitako teo amin'ny andalana ny serivisy ara-teknika iMac maro mitovy amin'ny ahy miaraka amin'ilay sary mahafinaritra… Renoir tena izy… voan'ny hafanana be ..
Efa tsy misy fiantohana intsony ... 2 3 andro monja no nipoitra ireo tasy ...
Noho izany, nahita mpanara-maso simba aho ... Nanao risika ...
Notanterahiko ny fitokanana sy ny vahaolana bebe kokoa saingy tsy nisy mandeha ...
Ity no fanandramako farany hanala ny tazo zanako ... ka nolaviko ...
Mba hanandrana hanavotra ny ainy ... natokako tamin'ny baoritra manokana ilay loharano izay tena meloka ... tamin'ny zavatra rehetra ... mafana loatra ... be loatra ... lazaiko fa tsy nisy injeniera nieritreritra ny hametraka ilay loharano toy ny mini Mac ??, ...
Amin'izao fotoana izao dia efa mihodina izy ary misy hafanana mivoaka izay saika may avy any aoriana .. Heveriko fa ny hafanana rehetra ao anatiny dia tena manimba ary betsaka kokoa amin'ny fanaraha-maso an'ity karazana ity ...
Raha mandeha izy, zavatra mbola tsy haiko .. Holazaiko aminao… Arahaba!
Hevitra tsara ry lehilahy fa hatramin'ny nahatazanao dia azonao atao ny mifantoka sy manitsy ny lavaka mba hahitsy.
Salama, raha somary nibolisatra ilay fandavahana ... saingy niasa izy, tsy niloko intsony ny efijery, mandeha tsara ihany koa, misy hafanana mivoaka avy amin'ilay loharanom-baovao mahavariana ... mety hahalasa fisintomana hafa ahy aho ... arahaba!
Mety mbola hevitra tsara ny manisy marika ny lavaka alohan'ireo lavaka ireo mba tsy hivily izy rehefa manomboka mihady. Misy koa ny rindrambaiko, Fan Control iray izay mamela anao hametraka ny mpankafy ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha kokoa hanery ny rivotra bebe kokoa hivoaka ny slot ambony, na dia mety hitabataba aza ny iMac amin'izay ary tsy mahafinaritra izany ...
Amin'izao fotoana izao dia resin'ny fahalianana fotsiny aho ary nametraka izany mba hitsapana ny tabataba. Eny, feo izany eny, fa ny maripana manamarika azy dia nilatsaka 23 degre, avy amin'ny 73 dia nilatsaka ho 50. esoriko izy satria tsy raharahako na mafana aza, tsy maneno ary tsy mahazo etona aho, koa ny mari-pana tsara indrindra amin'ny asan'ny rakikira mafy dia 68º ka tsara kokoa raha tsy misy fanaraha-mason'ny mpankafy.
Maria sy. dia hoy izy:
Misaotra anao!!! Tsy tao an-trano aho fa nanao Krismasy ary niaraka tamin'ny hatsiaka, rehefa niverina aho dia hitako fa nisolo tampoka tao anatiny ny veran'ny iMac. Ankasitrahako ity lahatsoratra ity satria rehefa avy namaky bilaogy sy forum maro aho dia nieritreritra fa ho sarotra ny hamahana ...
Navoakako tsy nisy olana ny vera mpiaro, nodioviko mora foana ary araka ny filazan'iza hoe, napetraka ny tenany.
Niaraka tamin'ny Mac nandritra ny fotoana fohy aho ary tiako. Azonao atao ny mitsikera, tsy misy lafatra eto amin'ity fiainana ity (avelao isika tsy ho popish kokoa noho ny Papa). Fa mazava amiko fa raha manana ny lesoka i Apple dia misy foana ny vahaolana tsotra sy azo ampiharina.
Valiny tamin'i María E.
alexuco dia hoy izy:
Nesoriko ny vera manjelanjelatra fiarovana, nirosoako nanadio azy io anatiny sy ivelany, ary mbola manana ireo tasy mahafinaritra ihany koa aho. Ny fanadiovana dia vita tsara, amin'ny rano, alikaola isopropyl, rano bebe kokoa, fanamainana ary chamois. Izaho koa dia nandrakitra an'io mba hijerena azy avy eo, ary tsy misy mihitsy. Manana ireo toerana ireo aho ao anatin'ny monitor. Efa tena kivy aho….
Valio amin'i alexuco
Tsy etona intsony ireo fa setroka.
mila manasaraka ny fonony amin'ny monitor ianao ary manadio azy saingy efa sahisahy be izany. Nitranga tamiko ny nanandrana ny fanaraha-maso ny mpankafy smc fa tamin'ny alàlan'ny famoahana hafanana be loatra dia niakatra teo an-tampon'ny monitor ary naloto.
mampamangy mpiara-miasa amin'ny tazo noho ireo fitaovana tsy mampino ireo; Hey, manana macbookpro aluminium 15-inch aho, ary teboka jiro vitsivitsy nipoitra teo amin'ny efijery vao tsy ela akory izay, roa amin'izy ireo, saingy eo an-tampon'ny "bara fanaraha-maso" fotsiny izy ireo (rakitra, edit, zahao, tantara, sns. .). Somary adala aho ary tiako ny mamorona zavatra bebe kokoa, ka rehefa nivadika hafahafa ny mac-ko ary niraikitra rehefa nanao horonantsary na fizotra mavesatra hafa dia nitady vahaolana hampangatsiahana azy amin'ny rano, ao ambaniny, miaraka amina rafitra miovaova avy amin'ny bitika kely loharano artifisialy (motera kely io izay manala rano amin'ny vera, ary mamerina azy amin'ny vera amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana lava; napetrako tao anaty tadibory ambanin'ilay mac sy voila ilay hosoka, ilay mac voalohany nampangatsiahan'ny rano hoy aho .. .) ankoatry ny teboka maivana amin'ny bara fanaraha-maso dia misy ihany koa karazan-tahotra kely ao anatiny, izay eo amin'ny ilany havia ambany amin'ny efijery; niseho koa vao tsy ela akory izay.
Ankoatra ireo angona rehetra ireo dia holazaiko aminao fa mampiasa ny solosaina 8 ora misesy na mihoatra aho satria tiako ny miasa mandritra ny alina, indraindray nohafanaiko loatra ka lasa adala ny rafitra (osx) ary manome tsy fahombiazana na dia aorian'ny famonoana azy sy fandefasana azy mandritra ny ora maro aza, saingy efa nitranga im-betsaka io ary namboarina ihany.
Ampianaro aho azafady, mpianatra aho, ary raha voadona ity masinina ity dia mieritreritra aho fa tsy afaka mividy iray hafa mandritra ny fotoana maharitra. VONJEO!!!!!!!! misaotra namana.
Fiarahabana avy any Amerika atsimo.
Mamaly an'i calamaro
ny zanako vavy dia macbookpro 15 santimetatra, 1.83Ghz intel core duo,
2 GB 667 Mhz DDR2 SDRAM, ary efa taona maro izy io, tompona faharoa aho, ka novidiko tanana faharoa. Vao haingana aho no nanova ny bateria ho an'ny generika sinoa tena mora vidy, ary fotoana vitsy lasa izay dia nanova ny karatra fitadidiana ilay iray anananao aho izao.
fanontaniana iray hafa: ahoana ny fandrefesanao ny maripanan'ny macbooks-nao; Azoko atao ve amin'ny tester izay mitondra ny fiasan'ny maripana fandrefesana? Inona ny mari-pana miasa tsara na ara-dalàna? Ahoana raha afaka mampiasa ny tester aho handrefesana ny maripana apetrako ao ny sensor? Amin'ny faritra aiza amin'ny solosaina no ametrahako ny sensor an'ny tester? ny ampahany izay anafana indrindra ny macbook-ko dia eto ambany, eo anelanelan'ny bateria sy ny sisiny misy ny efijery.
(zanako vavy io):
Anaran'ny modely: MacBook Pro 15 ″
Famantarana modely: MacBookPro1,1
Anaran'ny processeur: Intel Core Duo
Hafainganana amin'ny processeur: 1.83 GHz
Isan'ny processeur: 1
Isan'ny Cores: 2
Fahatsiarovana: 2 GB
Hafainganana amin'ny bus: 667 MHz
Boot Version ROM: MBP11.0055.B08
SMC Version (rafitra): 1.2f10
Isa isa (rafitra): W86110R0VJ0
Sensor Motion tampoka:
Nisy efa nandre fandaharana iray afaka manitsy ny teboka fotsy antsoina hoe "Pixel Fix" ???
Misy mahay mampiasa azy ????
amin'ny forum hafa dia nilaza izy ireo fa ny teboka dia noho ny fisian'ny transistors maromaro (na izay iantsoana azy ireo) amin'ireo izay mikarakara pixel tsy voafehy, hoy izy ireo ao, fa afaka manamboatra azy ireo indray ny Pixel Fix.
fanampiana shit !!!!!!!!! ny asako amin'ny oniversite dia miankina amin'ity milina ity ary mbola mila manodina tsaramaso aho (ka miresaka eto isika).
Aza mino ahy fa, mianatra ny haino aman-jery audiovisual aho miresaka momba ny sinema, sary ary horonan-tsary; Miasa amin'ny fikirakirana sary nomerika aho amin'ny ankapobeny, ary shit raha manodina ny efijery ianao dia misy fiantraikany be amiko izany.
tsara misaotra indray indray ry zandry.
(namana hitako io, fa valio ihany azafady):
Nahazo monitor plasma na LCD misy pixel niraikitra (tsy miova loko akory izy io)?
Manana mpanara-maso iray misy teboka izay toa somary mamiratra kely na somary manjavozavo kokoa noho ny sisa amin'ny efijery?
Ka mety izay anananao dia piksela iray na maromaro mijanona.
Voalohany indrindra, dia tokony homarihina fa tsy pixel maty no resahina.
Ny pixel maty dia matetika izay miseho mainty tanteraka na inona na inona mitranga amin'ny sisa amin'ny efijery; izany hoe maty, tsy misy loko.
Ny fanakanana ny pixel dia mety vokatry ny tsy fetezan'ny transistor na amin'ny fanaparitahana ny kristaly na plasma ranoka.
Raha manana an'io olana io ianao dia misy fomba mora hanandramana manamboatra azy:
* Vonoy ny solosaina ary araho. Ampiasao lamba na lamba lena mando, asio tsindry antonony amin'ilay faritra misy olana.
Hamarino tsara fa tsy hanery amin'ny faritra hafa amin'ny monitor, satria mety hiteraka olana amin'ny sehatra hafa ianao.
* Mandritra ny tsindry ataonao dia esory ny monitor sy ny solosaina.
* Esory ny lamba ary antenaina fa niverina ara-dalàna indray ny pixel nikatona.
* Ny tsindry dia manampy amin'ny fanaparitahana ilay ranoka manodidina ilay faritra mety hipetaka iray na maromaro. Raha tsy mahavaha ny olana izany dia aza milavo lefona.
Azonao atao ny manandrana rindrambaiko fanamboarana, toy ny JScreenFix na UDPixel, amin'ny fipihana ireo rohy etsy ambany:
Mariho fa ny fomba vao nofaritana dia ilaina ihany ho an'ny piksela nikatona, fa tsy mety amin'ny pikantsary maty.
Ary koa, na dia mirona hampiasa zato isan-jato aza ny fampiasana, dia tsara ny manamarika fa indraindray dia tsy te hiverina amin'ny ara-dalàna intsony ireo pixel nikatona tamin'ity teknika ity.
Calamaro: esory mitokana io MBP io ary diovy ny vavahadiny. Tsy ara-dalàna raha mafana be ka mampivadika adala OS X.
Izaho dia nanana iray tamin'ireo niasa 24 ora isan'andro, nahatratra volana maromaro nifanesy.
Tena mahaliana momba ireo teboka maty, eny an-dalana ... Hiezaka aho. Manana ny lojikany izy io.
JACA101, raha, araky ny voalazanao, dia setroka izy ireo fa tsy setroka, ahoana no namahanao azy? Raha mila manafoana ny raharaha aho dia tsy misy olana. Saingy nahita tutorial aho izay nanala azy manontolo ary mieritreritra aho fa tsy afaka miditra mihoatra ny nataoko. Midika izany fa raha ny monitor dia tsy misy intsony. Hafa mihitsy izany raha te hitady zavatra hafa aho, fa rehefa esorinao ilay mpiaro manjelanjelatra inona no azonao atao ???
Ohatra, avelako ho anao ny tutorial izay niasako ho an'izay rehetra azony ampiasaina, na raha misy mieritreritra ny fomba hanesorako ny tasy setroka.
Eny, mbola tsy nanapa-kevitra ny hanamboatra azy io aho, fa hanao izany.
Amin'ny andro anaovako izany dia handraikitra horonantsary momba ny fizotrany aho.
Isaky ny jaca101, raha toa ka voavaha ny tasy maha olombelona antsika, ahoana ny hevitrao no tokony hanaovana azy? Izany hoe, raha esorinao ny glossy hidirana amin'ny monitor, ary ity farany manana tasy ao anatiny, ahoana no hanadiovantsika azy ireo? Tsy mahita vahaolana aho satria tsy misy sombin-javatra intsony eo afovoany, ny monitor dia tsy azo atao mipoaka mihitsy, farafaharatsiny izay no hitako.
Tsy misy zavatra tsy azo atao ... fantatro fa ambany ny masoko, rehefa esoriko io dia halefako ilay horonantsary, raha tsy azo aleha ny fivoriambe, dia mety ilaina ny manitsakitsaka izany radika izany, fa raha manimba ny Miasa aho, avy eo mandanja ny mety hisitrika ny monitor iray manontolo amin'ny alikaola isopropyl na ranoka diélectric hafa izay hanadio tasy amin'ny alàlan'ny fifandraisana.
Angamba mbola tsy nanazava tsara ny momba ahy aho, na nisy zavatra tsy hitako. Ao amin'ny lahatsariko izay andefasako azy dia azonao atao ny mahita ny fomba fanesorako ilay glossy. Nanadio tsara ny zava-drehetra tamin'ny alikaola isopropyl aho, ary tsy nisy mihitsy, satria tsy teo ilay tasy, fa tao anatin'ny monitor. Noho izany, na inona na inona nomeko azy dia tsy nisy nilana azy.
Ny vahaolana tokana hitako dia raha ankoatry ny fanesorana ilay mpiaro voalohany na glossy dia azo esorina ihany koa ny monitor, saingy toa teny lehibe amiko izany, ary na dia amin'ny horonan-tsary mandeha amin'ny Internet aza avy amin'ny serivisy teknika an'ny Apple dia « intuited »Izay mety hipoaka ny monitor. Mety hitera-doza koa izany.
Misy manana hevitra momba ny bricomania ve?
Raha nanazava tsara ny tenanao ianao, eny ... Mbola miresaka momba ny fanaparitahana ny glosi monitor avy ao anatiny ihany aho ary raha tsy mety hipoaka izany dia atsobohy ao anaty vahaolana diélectrique. Tsy mieritreritra aho fa voan'izany ny ranon'ny sela miloko, satria tsy misy rano.
Masinina dia hoy izy:
Ka mieritreritra ianao fa tokony hesorintsika eo amin'ny efijery ny vera isaky ny mamono ny solosaina isika, satria aorian'ny famonoana ny setroka na ny rivotra mafana dia miseho indray. Tsy manaraka ny toetranao aho.
Valiny tamin'i Maquino
Igor dia hoy izy:
Ity fomba ampianarinao ity dia azo atao amin'ny iMac vaovao ihany koa? Samy 21,5 ″ sa 27 ″?
Mamaly an'i Igor
Jolumafez dia hoy izy:
Alexuco, ny vahaolana arosonao, dia tonga lafatra ho ahy ary tena mora ny nanatanteraka. Tao anatin'ny minitra vitsy dia namarana ny fijaliana nandritra ny herinandro vitsivitsy aho, nieritreritra fotsiny ny hampiakatra ny 7-inch iMac Core i27 ho an'ny serivisy Apple, na dia rakotry ny fiantohana maharitra mandritra ny roa taona mahery aza.
Tsy fantatro hoe hafiriana no haharitra alohan'ny hamerenan'ny teboka (aloka miely) amin'ny avaratra sy havanana ambany amin'ny monitor. Rehefa nanadio tamin'ny alikaola isopropyl aho dia nahatsikaritra fa somary mainty ny lokon'ilay lamba, ka inoako fa hamandoana sy setroka kely (hazavaiko fa mpifoka aho, sanatria izany). Tsy nisy pentina ny velaran'ny monitor, satria teo amin'ny vera mpiaro ihany izy ireo.
Marihiko fa ny fakako iMac dia faktiora faramparan'ny taona 2009, noho izany ny fampisehoana ny vera dia tsy mitovy amin'ny maodely ampiasaina amin'ilay horonantsary manazava.
Misaotra hatrany ary atoroko an'izay rehetra manana fahasahiana farafahakeliny ny fomba fiasa.
Valiny tamin'i Jolumafez
AnitA dia hoy izy:
Torohevitra tena tsara. Na dia tsy fantatro aza raha tena sahy nanatona azy ireo aho, nefa azo antoka fa raha sendra olana toy izao ... dia andramako izany!
Vao nahita toerana mando teo amin'ny efijery iMac teo ankavanan'ny farany aho. Namaky lahatsoratra misy tendrony aho, omeo hafanana miaraka amin'ilay fanamainana, ary vitako izany. Fa izao aho mijery indray ary tsy haiko raha tsy hoe tsy nanao tsara aho, sa miverina miverina forme!
Handeha haka ilay fanamainana indray aho ... ¬¬
Valio amin'i AnitA
I-tek.es dia hoy izy:
Torohevitra tsara vady. Suction cup, suède ary hiasa indray. Ary rahoviana, mankafiza mijery ny Apple lahy mamita ny atitany. Misaotra anao
Valio amin'i I-tek.es
Salama, manana imac 21,5 aho tamin'ny faran'ny taona 2009. Nanandrana nanala ilay vera faly manarona ny efijery aho, dia novakivakiko izany ... Ny andriamby no tompon'antoka raha efa nisaraka aho, ary ilay iray tao amin'ny zoro iray dia navela niaraka tamiko.ny antsasaky ny kristaly an-tanana .. Na izany na tsy izany, misy mahalala ve hoe aiza ianao no afaka mividy kristaly hafa? Tsy haiko izay manome ahy hanana an'io toa tsy misy vera, toa eo am-pananganana ny zavatra mahantra ..
Eny, eto: http://www.ifixit.com/Apple-Parts/iMac-Intel-21-5-Inch-Glass-Panel-EMC-No-2308/IF173-001?utm_source=ifixit_cart&utm_medium=cart_product_link&utm_content=product_list
Somary lafo ihany eny, fa wow ...
Edit: Nahita aho fa any Etazonia ihany no miasa ity sombin-javatra ity.
Angamba azonao atao ny manontany an'ny Benotac na mpivarotra premium apple izay manana serivisy teknika.
Sachie dia hoy izy:
Salama manana olana mitovy amin'ny efijery sy ny zavona tsy fantatra aho.
Te hahafantatra aho raha avy nanadio azy dia tapitra ny olana na mila ataonao tsindraindray. Misaotra anao
Valiny tamin'i Sachie
Herintaona lasa izay, dia navoakako ilay vera mpiaro nisy pentina sy nodioviko tsara. Naveriko ihany ny fizotrany, satria niverina ireo teboka voatahy, saingy niaraka tamin'ny vintana ratsy tsy hita ny efijery fa somary maloka ihany koa ny maso hita, manerana ny sisiny ankavanana. Hitako fa rehefa mandrehitra ny solosaina aho dia zara raha hita sy mitombo io toerana io rehefa mafana ny monitor. Mampatahotra izany ary hampiasa ny serivisy fiantohana izay mbola manan-kery aho, satria matahotra aho fa hiharatsy izany rehefa mandeha ny fotoana.
Ny teôriaziko dia ireo iMacs ireo izay miteraka hafanana be loatra, tsy manaparitaka azy ireo araka ny tokony ho izy. Manantena aho fa ny maodely farany misy ny port thunderbolt dia nanatsara an'io lafiny io (hatreto dia toa hitako fa tsy haiko hoe hatraiza).
Ny fanaoko dia ny mitazona ny masinina 24 ora isan'andro, mampiseho ny sary mihetsika rehefa tsy ampiasaina. Heveriko fa ny fampiasana dia tsy tsara ho an'ireo solosaina manokana ireo, noho izany dia manolo-kevitra ny hanohitra izany aho.
Ny hevitro dia ny hoe azo antoka kokoa ny mividy fampirantiana sinema na monitor thunderbolt (izay tsy miteraka hafanana betsaka, angamba) ary Macbook pro, ohatra.
Raha mbola tsy voaloto ilay monitor, dia tsara ny mijery ny vera ivelany ho an'ny zavona ary manadio azy matetika raha ilaina izany. Raha voaloto indray mandeha ianao dia mety manantena ny hamerina azy io indray.
Hevitra iray hafa noeritreretiko, ny mametraka mpankafy kely telo (toy ny an'ny karatra horonantsary na mpanodin-tsary sasany) ao anaty elanelana ambanin'ny foibe fanaraha-maso, mba hanerena ny fidiran'ny rivotra kely mankany anatiny, hanampy ny asa tsy fahampian'ny rafitra rivotra anatiny. Hataoko io raha vantany vao mahazo ireo mpankafy ireo aho.
Mamaly an'i jolumafez
Hiseho ireo tasy zavona raha mbola tsy "voavaha" ny toe-piainana
Marina tanteraka izany: raha tsy miova ny antony dia miverina ny vokany. Na eo aza izany toe-javatra iainana izany dia nitandrina milina hafa sy mpanara-maso mandeha tsara foana aho. Raha tsy misy ny fanelingelenana ny zavona niseho ary miverimberina ao amin'ny 27 ″ iMac hatramin'ny faran'ny 2009. Hita fa marina ny miahiahy fa ny famolavolana ireo iMac ireo dia manome fatiantoka mangatsiaka na fahalemena hafa amin'ny rafitra, izay mahatonga ny olana voalaza etsy aloha ao amin'ny maromaro amin'ireo singa ireo. Heveriko fa tsy izany no izy rehetra, izay azo antoka fa nahatonga an'i Apple hanana olana lehibe. Ary antenaiko fa na izany na tsy izany, ireo iMac vaovao dia misy fanamboarana fisorohana fanampiny.tsy very fahatokisana tanteraka aho, satria azoko ilay vaovao, andro vitsivitsy lasa izay. Na izany aza, hojereko tsara raha sanatria miverina ny tantara, ary koa, hiezaka ny tsy hihazona azy aho raha tsy ampiasaina, lava loatra, izay ataoko tsy am-piheverana amin'ireo Windows PC. Hanara-maso ny 15 Macbook pro aza aho, novidiana vao tsy ela akory izay. Miaraka amin'ny Mini tsy nanana olana aho, tamin'ny fampiasana monitor generic, ao anatin'ireo toe-javatra iainana mitovy ihany, amin'ny fampiasana azy (tahaka ny kasaiko hatao amin'ny iMac) ho mpizara audio sy horonan-tsary, mandritra ny ora maro isan'andro.
foza dia hoy izy:
NY OLANA NO FITSABOANA, NAHOMBY HANAFY ITY AKAIKY MAINTY ARY IRAY NY CORNERS PRESENT STAINS, HANALA ny vera aho ary tsy mandeha izany satria nanomboka niditra tao amin'ilay solomaso izay avy tao amin'ny angano io ary tsy azo esorina na tsia. TSY MIVAROTRA BETSAKA NY HEVITRAO…. Mitovy amin'ireo napetraka amin'ireo sélika gélika mba hijerena raha toa ka kely ny manampy amin'ny fandokoana ny hamandoana ary manandrana manandrana… FITSARANA!
Mamaly an'i chab
Jose L Mainieri F dia hoy izy:
Rehefa afaka kelikely, rehefa nifindra manodidina ny tranoko ny iMac 27-inch (araka ny nomeko ny vadiko), dia hitako fa nanjavona irery ireo tasy teo amin'ny sisiny ankavanana. Nahatonga ahy hieritreritra ny mety hahitana fa ny tasy maharitra dia vokatry ny «magnetisation» ny efijery, vokatry ny zava-misy fa amin'ny tontolo teo aloha dia misy fitaovana elektronika maro, fa indrindra indrindra, mpandahateny vitsivitsy avy amin'ny teatra an-trano , ny fitaovana stereo, ary suwoofer efatra eo ho eo. Ireo rehetra ireo dia mazava ho azy fa tsy misy amin'ny toerana ampiasain'ny vadiko io iMac io.
Ny iMac vaovao dia teo amin'ny toerana sy ny toe-piainana taloha ihany nandritra ny 6 volana, ary hatreto dia mbola tsy nampiseho olana tamin'ny fandokoana. Mety ho ny iMac voakasik'izany dia manana rafitra mandroraka, raha toa ka misy an'io karazana efijery io ny rafitra toy izany, toy ny tranga amin'ireo mpanara-maso katôlika sy fahitalavitra.
Raha sendra miditra ao anaty monitor ny hamandoana, amin'ny fampiasana lamba mando hanadiovana azy dia manoro hevitra anao aho handinika safidy roa atahorana: 1) Misy faritra elektronika sasany manala ny hamandoana. Azonao atao ny manandrana manisy kely amin'ny ampahany kely amin'ny sisin'ny efijery ary mahita ny valiny aorian'ny fiandrasana adiny roa, alohan'ny hamerenanao ireo fitaovana ireo. 2) zavatra archaic kokoa, dia ny fametrahana hafanana miaraka amin'ny volo fanamainana volo ambany, na apetraka eo akaikin'ny heater amin'ny habakabaka na tsara kokoa, dehumidifier.
Ilay mpiara-miasa izay nanoratra fa haharitra ny olana raha mbola tsy miova ny toetr'andro ... dia ampidiriko koa ny fepetra manodidina rehetra, toy ny fanelingelenana na faneriterena tafahoatra na akaiky.
Valiny tamin'i Jose L Mainieri F
Izaho dia nanana iMac teo ho eo ary nanana izany olana izany koa aho, na ireo olana ireo, satria misy roa, iray, dia ny tsy fahampian-tsofina na ny famehezana ny fitaratra ivelany, amin'ny toerana tena mando ary indrindra, izay ifohana sigara, hifoka. miditra / na hamandoana ary mandoto ny vera amin'ny dento. Mora voavaha io raha ny fanazavan'ilay namanay jaka101 etsy ambony, misy video. Fa ny tena olana dia ny fihenan'ny hamandoana vokatry ny hafanana vokarin'ny fitaovana anatiny toy ny: loharano, kapila mafy, motera fan, sns. Mba hamahana izany raha tsy manana antoka ianao dia avelako eto izay zavatra tena tsara ho ahy, somary mafonja io, saingy amin'ny faharetana kely sy tanana tsara dia voavaha izany. Jereo eto http://www.macuarium.com/cms/macu/guias/index.php?option=com_remository&Itemid=169&func=fileinfo&id=418
Olana iray tsy te-hamerina i Apple, saingy azo antoka fa izay vidin'ny fitaovana rehetra dia antenaina fa hamaha izany izy ireo.
Ny lahatsoratra momba ny fanadiovana tasy amin'ny hafanana ateraky ny singa anatiny ao amin'ny iMac, dia tena feno sy mahaliana, na dia ho ahy manokana aza, sahirana aho manapa-kevitra ny hanatanteraka azy. Raha teo am-piantohana ny masinina dia avelako ho an'ny teknisiana Apple. Ary raha efa tapitra ny fiantohana dia hoheveriko ireo teknisiana ireo ihany no hanao ilay asa. Raha ny tokony ho izy, dia nanararaotra mangataka fanavaozana kapila mafy ho 2 TB aho, raha azo atao, ary hevitra fisorohana sasany fa mitohy ny olan'ny tasy, raha eo am-pelatananao ny zavatra toy izany. Mampalahelo fa na iza na iza nanoratra ilay lahatsoratra dia nampanantena ampahany faharoa, izay hanazavany ny fomba hisorohana ny tasy tsy hiseho indray, saingy tsy hitako na hitako ilay tapany faharoa, izay tena hampiasaina, nefa hanapa-kevitra raha hanatona ny atin'ny iMac.
Mora dia madio tokoa ny manadio, ka tokony hoentinao ao amin'ilay boky. Vidiny inona no azon'izy ireo, tsy lazain'izy ireo aminao ny fomba fanadiovana azy hahafahanao miantso ny serivisy teknika ary manome vola anao amin'ny "kijana"
Dimagic1 dia hoy izy:
Misaotra fa efa nieritreritra ny hiantso appel momba ny antoka aho.
Valiny amin'ny Dimagic1
Salama, nisy zavatra nitranga tamiko tao amin'ny iMac izay tsy fantatro raha misy ifandraisany amin'ny hamandoana: rehefa ampodiko io dia misarom-boaly fotsy ny takelaka iray manontolo, rehefa natory aho ary vetivety dia tsindrio ny totozy hialana amin'ny torimaso dia izay!, toa tsara ny écran ary very ny voaly milky. Misy mahalala ve hoe nahoana no tokony hatao izany? Nisy olona nitranga ve? Ahoana no namahanao azy? ... Misaotra betsaka mialoha.
Fatima tsara, firy taona ny iMac anananao? Raha tsy misy manome valiny anao dia azonao atao ny miantso an'i Apple mivantana, mety hanome fanazavana anao ny antony hitrangan'izany izy ireo. Manantena aho fa hamaha azy io tsy ho ela ianao, arahabaona.
Salama, misaotra betsaka anao namaly ahy. Hiantso an'i Apple aho araka ny nolazainao; ny solosaina dia nanomboka tamin'ny 2009. Manantena aho fa hanamboatra azy io tsy ho ela. Miarahaba.
Misaotra anao ary rehefa mahalala zavatra ianao dia lazao aminay 😉
Nanandrana ny fikafika fotsiny aho satria nisy teboka vitsivitsy teo amin'ny efijery, nieritreritra aho fa nanana tombo-kase tsara izy ka tsy hitako izay hatao, novakiako ilay lahatsoratra ary noezahiko tamin'ny kaopy suction ny fiara. Amin'izao fotoana izao dia tonga ny efijery dia azoko atao ny manadio azy ary apetraka. Dimy minitra no nanaovako azy. Misaotra anao.
Valiny tamin'i Enmanuel
Yiya rangel dia hoy izy:
Manana olana amin'ny MacBook Pro aho, andro vitsy lasa izay dia hitako fa nisy toerana fotsy lehibe niseho teo amin'ny efijery. Tsy haiko ny antony mahatonga an'io lesoka io, ny Mac-ko tsy eo ambany fiantohana intsony.
Tsy nandatsaka azy aho, tsy nanantona azy tamin'ny masoandro, tsy hitako izay lesoka nataoko mba hisehoako io tasy io. Manantena aho fa afaka milaza zavatra amiko ianareo, misaotra betsaka tamin'ny fiheverana.
Mamaly an'i Yiya Rangel
Salama! Ny efijery an'ny Imac dia toa manjavozavo eo an-joro ambony sy eo afovoany, tsikaritra ihany rehefa tsy mandeha izy; inona izany?
Vaky ianao. Roa ora manome azy amin'ny efijery, ary amin'ny farany dia manamboatra ny tenany amin'ny fanasana azy amin'ny lovia izy. ho ela velona ianao!
Josefa Jesosy dia hoy izy:
Manana latabatra 21,5 ″ mac aho izay tena niasa tsara, nanitsy niaraka tamin'ny finalcut, ary ny adobe premiere cs6, vao tsy ela akory izay dia nanomboka nipitika ny écran indraindray, ary nanjary mahazatra fa manana efijery fanampiny izay ahitako ny interface ny programa fanovana.
Telo andro lasa izay dia maty ny efijery an'ny mac-ko ary ny iray fanampiny dia manohy miasa mampiseho ny fandaharana fanovana, milaza amiko izy fa mandeha ara-dalàna ny mac saingy miaraka amin'ny efijery solosaina, rehefa ampodiko ilay izy dia miposaka ny efijery ary mijanona mainty sisa tavela. ny efijery fanampiny. Indraindray dia mirehitra izy io fa tsy miaraka amin'ny famirapiratanana tokony hananany, tsy manintona izy, tsindrio ny bokotra famirapiratana ary farafaharatsiny, tsindrio ny famirapiratana ambany ary vonoina ny efijery.
Inona no mety nitranga raha simba ilay karatra video na ny écran? Nataoko ny programa diagnostika fa tsy manondro fahasimbana izany.
Valio Jose Jose
lehilahy milina ianao!
Jocyjoce dia hoy izy:
Nivadika ny IMAC-ko aho haka sary vitsivitsy, tsikaritro tampoka ilay toerana fotsy nahatonga azy ireo manjavozavo amin'ny sary, ary nitombo izy io. Novonoiko izy io ary nanova toerana aho ary nanjavona ity zavona ity. Hiezaka hanadio azy aho. Fa ny fanontaniako dia hoe: azoko atao ve ny manarona azy amin'ny lamba? Satria misy hamandoana ao amin'ilay tranokala nefa maina ilay rivotra ao amin'io faritra io ka voasarona izy dia izany no hiteraka fahasimbana.
Mamaly an'i JocyJoce
Louis mantione dia hoy izy:
Novidina tamin'ny taona 2008 ny IMAC-ko, mandeha tsara izany, saingy misy pitsopitsony roa manelingelina ahy, ny 1: tafiditra ny CD drive, rehefa nametraka CD tao aho dia niraikitra ary tsy nivoaka tamin'ny lafiny rehetra. , ary tsy nisy afaka nanampy ahy satria hita fa tsy maintsy esorinao ilay izy ary hermetika ny solosaina !!!!!, ary ny faha-2: manomboka mipoitra eo amin'ny écran ny patch na teboka mainty! izay manarona ny écran fa miseho ary manjavona irery, IZA NO AZA HANAMPY AHO !!!!!
Valiny tamin'i Luis Mantione
Bravo ho an'ny vahaolana, nesorinao haingana sy mora ny tsy fankasitrahana ahy.
Misaotra anao mahafinaritra, ny nanala ny vera fotsiny sy ny tasy nanjavona tamin'ny majia
Amboary ny mail.app amin'ny kaonty hotmail nefa tsy mampiasa plugin
Ny lafiny mamirapiratra an'ny KeyNote an'ny Apple ao amin'ny MacWorld 2009